API၊ REST, SOAP, XML၊ JSON, WSDL နှင့်အခြားအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း
API ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ နှင့်အခြားအတိုကောက်: REST, SOAP, XML, JSON, WSDL
ကြာသပတေးနေ့, စက်တင်ဘာလ 24, 2015 သောကြာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 8, 2017 Douglas Karr
သင် browser တစ်ခုကိုအသုံးပြုသောအခါသင်၏ browser သည် client server မှတောင်းဆိုမှုပြုသည်။ server သည်သင့် browser ကို စုစည်း၍ ဝက်ဘ်စာမျက်နှာကိုပြသရန်ဖိုင်များကိုပြန်ပို့သည်။ သို့သော်သင်၏ဆာဗာသို့မဟုတ်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာကိုအခြားဆာဗာတစ်ခုနှင့်စကားပြောစေလိုလျှင်ကော။ ၎င်းသည် API တစ်ခုကို code ရေးရန်လိုအပ်သည်။
အဘယ်အရာကိုမ API ကို ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ
API သည်အတိုကောက်ဖြစ်သည် လျှောက်လွှာ Programming Interface ကို။ တစ်ဦး API ကို သည် web-enabled နှင့် mobile-based applications များတည်ဆောက်ရန်အတွက်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များ၊ protocol များနှင့် tools များအစုတစ်ခုဖြစ်သည်။ The API ကို သင်ထံမှအချက်အလက်များကို (authentication) authentication, request နှင့်ဘယ်လိုရယူနိုင်သည်ကိုသတ်မှတ်သည် API ကို ဆာဗာက။
တစ်ဦး API ကိုကဘာလဲ?
ဝဘ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေတွင်အသုံးပြုသောအခါ API ကို ပုံမှန်အားဖြင့် Hypertext Transfer Protocol (HTTP) request message များနှင့်တုန့်ပြန်မှုမက်ဆေ့ခ်ျများ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်တို့ဖြစ်သည်။ ၀ က်ဘ် API များက ၀ န်ဆောင်မှုမျိုးစုံကို mashups ဟုလူသိများသော application အသစ်များထဲသို့ပေါင်းထည့်သည်။ဝီကီပီးဒီးယား
API တည်ဆောက်ရာတွင်အဓိက protocol နှစ်ခုရှိသည်။ Microsoft .NET နှင့် Java developer များကဲ့သို့သောပုံမှန် programming language များသည် SOAP ကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။ သို့သော်လူကြိုက်အများဆုံး protocol သည် REST ဖြစ်သည်။ သင်တုန့်ပြန်မှုရရန်ဘရောင်ဇာတစ်ခုတွင်သင်လိပ်စာတစ်ခုရိုက်ထည့်သကဲ့သို့သင်၏ကုဒ်သည်တောင်းဆိုမှုကိုပို့ပေးသည် API ကို - ဆာဗာပေါ်ရှိလမ်းကြောင်းတစ်ခုသည်သင်တောင်းဆိုထားသောအချက်အလက်များနှင့်မှန်ကန်စွာမှန်ကန်ကြောင်းနှင့်မှန်ကန်စွာတုန့်ပြန်သောလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ SOAP အတွက်တုန့်ပြန်ချက်များသည်သင်၏ browser (ဘရောက်ဆာ) အသုံးပြုသောကုဒ် HTML ကဲ့သို့အလွန်များသော XML နှင့်တုန့်ပြန်သည်။
API Code ကိုမျဉ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းမရေးဘဲစမ်းသပ်လိုလျှင်၊ DHC အရမ်းကောင်းတယ် ခရုမ်းအပလီကေးရှင်း APIs တွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြီးသူတို့တုန့်ပြန်မှုတွေကိုမြင်တာပေါ့။
Acronym SDK သည်ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။
SDK သည်အတိုကောက်ဖြစ်သည် Software Developer Kit ပါ.
ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်သူတို့၏ API ကိုထုတ်သောအခါ၊ ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းကိုမည်သို့ဖော်ပြသည်ကိုဖော်ပြသည့်တွဲဖက်စာရွက်စာတမ်းများရှိသည် API ကို ၎င်းကိုမည်သို့မေးမြန်းနိုင်ကြောင်းနှင့်သင့်လျော်သောတုံ့ပြန်မှုများကမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုသည်။ developer များ ဦး ဆောင်မှုရရှိရန်အတွက်ကုမ္ပဏီများသည်မကြာခဏပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည် Software Developer Kit ပါ developer ရေးသားနေသည့်စီမံကိန်းများတွင်အတန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအလွယ်တကူထည့်သွင်းရန်။
Acronym XML ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
XML သည်အတိုကောက်ဖြစ်သည် eXtensible Markup ဘာသာစကား။ XML ဆိုသည်မှာ data ကိုလူ့ဖတ်နိုင်သောစက်နှင့်ဖတ်နိုင်သည့်ပုံစံဖြင့် encode လုပ်ရန်အသုံးပြုသော markup language တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီမှာ XML ဘယ်လိုပေါ်လာသလဲဆိုတာဥပမာပေးပါ။
အတိုကောက် JSON ဘာကိုဆိုလိုသလဲ
JSON ကို အသုံးပြု၍ အထက်ပါအချက်အလက်များ၏နမူနာတစ်ခုဖြစ်သည်။
"ခေါင်းစဉ်": "ထုတ်ကုန် A",
အတိုကောက် REST သည်ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။
REST သည်အတိုကောက်ဝေါဟာရတစ်ခုဖြစ်သည် ကိုယ်စားပြုပြည်နယ်လွှဲပြောင်း ဖြန့်ဝေ hypermedia စနစ်များများအတွက်ဗိသုကာစတိုင်။ ဒါကြောင့်ရွိုင်းသောမတ်စ် Fielding အားဖြင့်အမည်ရှိ
Whew ... အသက်ပြင်းပြင်းရှူ! သငျသညျတစ်ခုလုံးကိုဖတ်ရှုနိုင်သည် ဒီမှာစာတမ်းတစ်စောင်တင်သွင်း, ဗိသုကာပုံစံများနှင့်ကွန်ယက် -based ဆော့ဝဲဗိသုကာများ၏ဒီဇိုင်းကိုခေါ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအတွက်အတွေးအခေါ်ပညာရှင်ဘွဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်များကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကျေနပ်မှုအတွက်တင်သွင်း ရွိုင်းသောမတ်စ် Fielding.
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာ Fielding! ပိုမိုသိရှိရန် REST ဝီကီပီးဒီးယားမှာ။
Acronym SOAP ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
ဆပ်ပြာသည်အတိုကောက်ဖြစ်သည် ရိုးရှင်းသောအရာဝတ္ထု Access ကို protocol ကို
ငါဟာပရိုဂရမ်မာတစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့် SOAP ကိုနှစ်သက်သော developer များက Web Service Definition Language (WSDL) ဖိုင်ကိုဖတ်သော standard programming interface တွင် code ကိုအလွယ်တကူဖွံ့ဖြိုးနိုင်လို့ပါ။ ၎င်းတို့သည်တုံ့ပြန်မှုကိုဆန်းစစ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည် WSDL ကို အသုံးပြု၍ ပြီးပြီဖြစ်သည်။ SOAP သည်မက်ဆေ့ခ်ျဖွဲ့စည်းပုံနှင့်၎င်းကိုမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုဖော်ပြသည့်ပရိုဂရမ်မာစာအိတ်တစ်ခုလိုအပ်သည်။ လျှောက်လွှာပုံစံသတ်မှတ်ထားသောဒေတာအမျိုးအစားများကိုဖော်ပြရန်ကုဒ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့်တုံ့ပြန်မှုများကိုကိုယ်စားပြုရန်စည်းဝေးကြီးတစ်ခုလိုအပ်သည်။
သင်၏အီးမေးလ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများတွင်မည်သည့် element များကိုသင်စမ်းသပ်သင့်သနည်း။
9:2017 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 2, 35
စက်တင်ဘာ 26, 2017 မှာ 11: 33 AM
6:2017 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 1, 13 တွင်
ဤအချက်အလက်ကို ပို့စ်တင်ခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည် - REST သည် ဘာကိုဆိုလိုသည်ကို အကြာကြီး သိချင်နေပါသည်။ 🙂
13:2020 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 6, 44 တွင်
နောက်ဆုံး (နောက်ဆုံးတော့!) ဤယခင်က ကြောက်စရာကောင်းသော အသံထွက်အတိုကောက်များဟူသည် တိုတိုအကျဉ်းချုပ်ဖြစ်သည်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့် တိုက်ရိုက်ဘာသာစကားကို အသုံးပြုသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ရလဒ် = ဤကျောင်းသားဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူအတွက် အနည်းငယ်ပိုတောက်ပသော အနာဂတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
14:2020 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 3, 40 တွင်
မင်္ဂလာပါ Vic ဟုတ်ကဲ့... သဘောတူပါတယ်။ စကားလုံးတွေက ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ API တစ်ခုထံ တောင်းဆိုချက်တစ်ခုကို ပထမဆုံး ပရိုဂရမ်တင်ပြီး ကလစ်နှိပ်လိုက်သည်ကို သတိရမိပြီး အမှန်တကယ် မည်မျှလွယ်ကူသည်ကို မယုံနိုင်ဖြစ်မိသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!